Warar - Farqiga u dhexeeya Dhinacyada iyo Buffet-ka
Dhinacyadu waxay ku imaan karaan qaabab fara badan oo leh astaamo badan oo kala duwan. Shaashadda casriga ee casriga ahi badanaa waa mid jilicsan oo waxay yeelan kartaa lugaha waxoogaa ka yar kan loox dhaqameed.
Marka la dhigo qolka fadhiga, dhinacyadu waxay u shaqeyn karaan sidii xarun madadaalo. Sababtoo ah qaddarkooda badan ee keydinta iyo in telefishannada badankood si raaxo leh ugu habboon dusha sare, dhinacyadu waxay ikhtiyaar weyn u leeyihiin xarun madadaalo.
Markii la dhigo foor, loox ayaa loo isticmaali karaa in lagu soo dhoweeyo martida meel u adeegta keydinta furayaasha, boostada, iyo walxaha qurxinta.
Buffet, sida badan oo kale, waa qeyb ka mid ah alaabta guriga oo leh meel dheer oo keydkiisu hooseeyo. Buffetyada ayaa inta badan ah sheyga ugu muhiimsan ee u dhexeeya labada. Buffetyada ayaa badanaa yeelan kara armaajoyo waaweyn iyo lugaha gaagaaban taas oo ka dhigaysa inay hoos ugu fariisato dabaqa.
Ugudambeyn, Buffet iyo sabuurad waa magacyo laysku beddeli karo isla isla alaabada.Magaca kaliya ayaa isbedelaya iyadoo lagu saleynayo halka alaabta guriga la dhigo. Loox lagu dhejiyay qolka cuntada waxaa loo yaqaan 'buffet', laakiin markii loo wareejiyo qolka fadhiga, waxaa loo yaqaan 'sideboard'.
Buffetyada waxay u adeegaan sidii qayb weyn oo ka mid ah qalabka wax lagu keydiyo ee qolkaaga cuntada. Qalabka qalinka, taarikada adeegaya iyo maryaha ayaa badanaa lagu keydiyaa buffets. Miisaska hoose ee hoose waxay ka dhigaan aag aad u wanaagsan oo loogu adeego cunno, kafee, ama shaah markii martidu ay ka weyn tahay.